Aagan: January 2009
Posted by Aagan Team at 8:36 PM5comments:
Posted by Aagan Team at 1:54 PM2comments:
आजकाल दिनप्रतिदिन नेपाली नयाँ पुस्ता नयाँ नयाँ प्रबिधी सम्बद्द उपकरणहरुको प्रयोगमा लहसिदै गएको छ । थ्रीजी मोबाईल फोन र आईपोड त छदै छ पछील्लो अवधिमा युवापुस्ता ल्यापटप कम्प्युटर तर्फ आकर्षित हुँदै छ । अहिलेको पुस्ता ल्याप्टपलाई ग्ल्यामरस उपकरणको रुपमा बुझ्छ । ल्याप्टप भए अरु के नै चाहियो र ? भन्ने युवाहरु थुप्रै भेटिन्छन काठमाडौं र अन्य शहरहरुमा । त्यसैगरी आजकल झोलामा ल्यापटप बोकेर हिंड्ने युवाहरु पनि थुप्रै भेटिन्छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ल्यापटप आवश्यकता नै बनिसकेको हो त नेपाली युवाहरुको लागि? कि नेपाली युवा आफुलाई समय र प्रबिधीसँग upto date राख्ने क्रम्मा ल्यापटप तर्फ आकर्षित भएका हुन ?
Posted by Aagan Team at 4:29 PM2comments:
Posted by Aagan Team at 2:56 PM4comments:
संकटनै संकटले घेरिएको अहिले को समयमा फेरी अर्को संकटले बिना अनुमती प्रवेस गरेको छ। नेपालको काकडभित्तामा बर्डफ्लु भेटिएको छ। उर्जाको संकटले ग्रसित मुलुकमा अब फेरी बर्ड फ्लु!!!!!अब त नेपाल को पर्यायबाची शब्द नै संकट नै भैसक्यो!!!!
Posted by Aagan Team at 2:52 AM2comments:
Posted by Aagan Team at 2:31 AM No comments:
आज हामी केही साथीहरु मिलेर नेपाल तथा बिदेशमा रहनुहुने विद्यार्थी तथा आप्रबासी हरुको बिचमा आपसी सदभाव र सम्बन्ध लाई सुमधुर बनाऔ भन्ने उद्देस्यका साथ यो ब्लग खोलेका छौ। तपाईंहरुले पनि आफ्ना गुनाशा तथा बिचार हरुलाई यो ब्लग मार्फत अरुका बिचमा राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो सानो प्रयासले सम्पूर्ण नेपालीहरुमा आफ्नोपन को महसुस गराउन सक्छ की ?
हामी तपाईंको अमुल्य बिचार तथा सुझाब को अपेक्ष्या गर्दछौ।
Posted by Aagan Team at 1:41 AM 10 comments: